Taariikhda: Sheekh Muxammad Bin C/wahaab – Wajibad
Taariikhda: Sheekh Muxammad Bin C/wahaab
Imaam: Muxammad bin Cabdul-Wahaab bin Suleymaan Al-Tamiimiyi
Waxaa Faafinta Buugan markii ugu horeysay Suura galiyay shabakadda dacwada ee maktabada.com Waxaan Dhamaan walaalaha Soomaaliyeed ee nasiibka u yeelan doona inay aqriyaan buugan qiimaha badan ka codsanaynaa inaysan ducadooda ka hilmaamin Sheekh Muxammad C/waahab iyo walaalka noo sahlay in aan afkeena hooyo kaga dharagno taarikh-da Imaamkaas, sidoo kale ha ka hilmaamina Ducadiina walaalihiina shabakadda Maktabada.com
Mahad oo idil Allaah ayey u sugnaatay, ammaan iyo nabadgelyana nabigeenna muxammad ah dushiisa ha ahaato, iyo ehelkiisii iyo asxaabtiisii iyo intii wanaaga ku raacday ilaa qiyaamuhu ka oogmo.
Intaa kaddib nabigeenna sallalaahu calayhi wasallama waxaa uu xadiis ka sugnaaday ku yiri:
Oo micnihiisu yahay:
‘’Alle wuxuu umaddan usoo saaraa qarnigii walba mar, qof diintooda u nooleeya“.
Laga soo bilaabo qarnigii koowaad ee hijriyada ilaa iyo xilligan waxaa dunida islaamka soo maray culimo sida qorraxda u ifayey, hawshooduna ahayd noolaynta diinta islaamka, diintii ayey ifiyeen, iyaguna way ifeen, diintii ayey koryeeleen, iyagana diintii ayaa koryeeshay, waa halkii nabigeennu sallalaahu calayhi wasallama xadiis kale kaga yiri:
“Allaah kitaabkan dad ayuu kor ugu qaadaa, qolo kalena hoos ayuu ugu dhigaa.” [Muslim ayaa weriyey.]
Qoraalkan hortaada yaalla wuxuu ka hadlayaa caalim kuwaa ka mid ah, safka horena kaga jira, kana soo bidhaamay saxaraha iyo gawaanka jaziiradda carbeed, balse dhawaqiisu saameeyey shanta qaaradood, haba kala badnaado raadka uu ku reebaye. Waa qoraal ka hadlaya halgan diineed oo ka hanaqaaday deegaan in badan dunida ka daboolnaa balse kaddib noqday tiriig ifkiisa lagu soo hirto.
Waa halgan ujeedadiisa iyo halka uu ku wareegayaa ahayd u noqoshada diintii saafiga ahayd ee uu nabigeenna muxammad ah inooga tagay, sallalaahu calayhi wasallama.
Caalimka halgankan bilaabay kana miradhaliyey waa Imaam Muxammad bin Cabdul-Wahaab bin Suleymaan Altamiimiyi, waxaa qoraalkani taaban doonaa taariikhdiisii nololeed iyo qoyskiisii, bilawgii tacliintiisii iyo safarradiisii aqoon-kororsi, sababihii halganka ku kallifey, iyo ujeeddadii uu ka lahaa, dhibkii uu u maray meel marinta ujeeddadiisa, mirihii iyo raadkii halganku reebay, dadkii ka horyimid iyo kuwii taageeray, iyo arrimo kale oo aad qoraalka ku dhex arki doontaan insha Allaah.
Sababaha aan qoraalkan u doortay
Waa arrin ay isweydiinayaan akhristayaal badani, muxuu qoraagani isugu hawlay mawduucan, wakhtiga intaa le’egna ugu bixiyey soo saarista kitaabkan? Jawaabtu waxaa ay tahay dhowr arrimoodba:
1: Iyada oo halgankii Sheekh Muxammad C/wahaab uu ahaa mid dunida soo mara saddexdii qarni ee ina dhaafay kii ugu cuslaa;
2: Iyadoo uu ahaa halgan ku saabsan saafiyeynta diinta Alle iyo baraxtirka xuquuqda uu ku leeyahay uunkiisa;
3: Aniga oo ka mid ah dadka aaminsan in caqiidadii sheekhu ku baaqay tahay caqiidada islaamka ee saxda ah ee uu nabi muxammad ammaan iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee ku rabbeeyey asxaabtiisii, asxaabtuna usoo gudbiyeen jiilkii xigay, culimadii ka danbaysayna ku qoreen kutubtii sunnada iyo caqiidada ay ka allifeen qarniyadii fadliga badnaa, wixii kasoo horjeedayna ay ahaayeen caadooyin iyo dhaqammadii jaahiliyada oo lasoo nooleeyey;
4: Iyadoo umadda Soomaalidu aysan aqoon badan u lahayn shakhsiyadda iyo taariikhda imaamkan, kuwo taageersan iyo kuwo kasoo horjeeda, iyo kuwo aan danba ka lahayn intaba.
Afartaa waxyaabood ayaan oran karaa waa ay ugu horreeyaan waxyaabihii igu bixiyey inaan qoraalkan u qalin qaato.
‘’Qoraalkan afsoomaaliga ahi waa kii ugu horreeyey inta aan ogahay ee laga qoro sheekh Muxammad, marka laga reebo maqaallo taageero iyo dhaleecayn intaba leh oo saxaafadda qaarkeed lagu qoray, balse marnaba ma arag mana maqal kitaab afsoomaali ah oo sheekhan ka taariikhaynaya.’’
Waxaan ku dadaalay maadaama qoraalka laga soo tarjumay kutub badan oo carabi ku qoran, usluubkooduna kala duwan yahay, inaan u bato dhanka tarjumidda erayeed, iyada oo marmarna aan isticmaalay tarjumid guud oo micnaha iyo dulucda ina tusaysa;
Waxaa kale oo aan inta karaankayga ah ku dadaalay in qoraalku koobnaado, oo aynu qayb walba ka bixinno warbixin ujeedada ina dhacsiinaysa, iyada oo oo laga fogaanayo dheerayn lagu daalayo iyo gaabin dantii la lahaa wax u dhimaysa.
Dabcan kitaabkani qofkii aan Sheekh Muxammad warbixin badan ka hayn inuu wax u kordhin doono ayaan filayaa, waxaanan kula dardaarmayaa akhrisataha qaba aragtidan mid ka duwan inuu fikraddiisa usoo bandhigo si deggan oo cilmiyeysan, maadaama lagu jiro casri qoraalka iyo cilmi-baaristuba baaheen waa in aynu ixtiraamnaa maskaxda iyo caqliga akhristayaasha.
Wixii aan saxay oo xaqa ku haleelay Allaah ayaan uga mahad naqayaa, wixii aan ku gafeyna waa ilduuf aniga iga dhacay, Allaah ha iga dhaafo, ciddii igu baraarujisana waan uga mahad naqayaa.
Mahad oo idil Allaha xaqa lagu caabudo ayey u sugnaatay, na waafajiyey u istaagidda hawshan, noona fududeeyey qoraalkan. Waxaa mahad-celin iga mudan dadkii ka qaybqaatay inuu kitaabkani soo baxo, talo iyo taagna ku biiriyey, waxaanan leeyahay jazaakumullaahu kheyran.
Afeef iyo Codsi furan
Waxaad kitaabka ku arkaysaan inaan marar badan adeegsaday erayo aan ka mid ahayn kuwii guddiga Afsoomaaligu meel mariyey, sida “Z” oo aan u adeegsaday erayga carabi ahaan waafaqsan iyo “Th” oo aan u isticmaalay erayga carabiga ah ee “ث ” iyo anigoo laalaabay erayo aan ku jirin kuwii guddigu ansixiyey ee ahaa: M, N, L,G,R,D,B, taana waxaa keentay baahida qoraalka, maadaama aan hadallada carabi kasoo tarjumay. Wixii kale ee khalad naxwe ama luqadeed ah, waan uga mahadnaqayaa ciddii igu baraarujisa.
Qore: Muxammad Cusmaan Aadam
Taariikhda: Rabiicu Althaani:1431H (20 March 2010)
Halkaan ka bilaaw |Tusmada
Qoyskii sheekha, dhalashadiisii iyo barbaariddiisii
Safarradiisii waxbarasho iyo culimadii uu cilmiga ka qaatay
Kusoo noqoshadiisii deegaankiisa
Warqad ku socota kooxaha takfiirka ah
Qabuuraha iyo kaalintii ay shirkiga ku lahaayeen
Waxyaabaha qabuuraha ka reebban
Sidee saxaabadu ula dhaqmi jireen qabriga nabiga iyo qabuurihii kale ee madiina ku yiillay?
Bilawgii qubuuriyiinta ee ummaddan!
Sidii qubuuraha loogu fitnaysnaa xilligii sheekhu soo baxay
Burburinta qabuuraha iyo arrin muhiim ah marka qabuuro dhisan la burburinayo
(Marxaladihii halganka iyo mirihiisii) Marxaladihii halganka
Mirihii halganka 106 Kutubtii sheekhu qoray
Qayb ka mid ah warqadihii uu diray
Dawladihii sacuudiga:1aad, 2aad iyo 3aad
Geeridii sheekh Muxammad! 125 Dawladdii sacuudiga ee labaad
Warbixin ku saabsan Dawladdii rashiidiyiinta
Raadkii uu ku yeeshay dibadda jaziiradda (Yaman, Masar, Hindiya, Induniisiya, Galbeedka Afrika, Shaam iyo Ciraaq, Jazaair iyo Soomaaliya)
Sababihii sheekha guuleeyey
Dadkii ka horyimid noocyadoodii, dacaayadahoodii iyo shubhooyinkoodii
Dadkii ka horyimid iyo noocyadoodii
Dacaayadahoodii iyo jawaabihii laga bixiyey
Dacaayaddii koowaad: Nabinimo ayuu sheegtay, nabigana wuu liidaa!
Dacaayaddii labaad:mujassim ayuu ahaa:
Dacaayaddii saddexaad: karaamooyinka awliyada ma ogola!
Shubhada koowaad:Gaalaysiinta iyo dagaalka:
Sheekhu dawladdii Turkiga miyuu ku baxay?
Shubhada labaad:tawasulka ayuu diiday!
Shubhada saddexaad: shafeecaysiga nabiga ayuu diiday
Shubhada afaraad: Siyaarada ma ogola! Qubuuraha dadka wanaagsanna wuu liidaa!!
Culimadii taageertay iyo kutubtii lagaga taariikheeyey
10 thoughts on “Taariikhda: Sheekh Muxammad Bin C/wahaab”
Taariikhda Wahaabiyada | Learn All About The Stories of The Prophets, & All Islamic Wajibad & The Sunan.